अक्टोप्रिन्ट: तपाईंको थ्रीडी प्रिन्टर टाढैबाट व्यवस्थापन गर्नुहोस् | नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | | 3D मुद्रण, रास्पबेरी Pi
यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने 3D मुद्रण, पक्कै पनि तपाईं बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ अक्टोप्रिन्ट परियोजना। यी additive निर्माण उपकरणहरूको रिमोट कन्ट्रोलको लागि एकदम व्यावहारिक खुला स्रोत सफ्टवेयर। यस प्रकारको कार्यक्रमको साथ तपाईले सरल र सहज व्यवस्थापन प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईको परियोजनाहरूमा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न। तपाईंको कार्यक्रमहरूको लागि एक थप पूरक CAD डिजाइन y अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू यस प्रकारको त्रि-आयामी मुद्रणको लागि।
1 अक्टोप्रिन्ट भनेको के हो?
1.1 यस सफ्टवेयर को विशेषताहरु
2 अक्टोप्रिन्टका लागि प्लगइनहरू
2.1 प्लगइन कसरी स्थापना गर्ने
अक्टोप्रिन्ट भनेको के हो?
OctoPrint एउटा नि:शुल्क र खुला स्रोत अनुप्रयोग हो 3D प्रिन्टर नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन। यसको विकासकर्तालाई Gina Häußge भनिन्छ, जसले आफ्नो 3D प्रिन्टरको लागि आफ्नै नियन्त्रण कोड प्रयोग गर्‍यो। तर परियोजना धेरै चाखलाग्दो देखिन्थ्यो र स्पेनी निर्माता BQ आकर्षित भयो, विकासको लागि वित्तपोषण गरियो ताकि OctoPrint आजको जस्तो छ: यो उपयोगिताको लागि सबैभन्दा राम्रो सफ्टवेयर मध्ये एक र विश्वभर प्रयोग गरिन्छ।
यो संग तपाईं सक्नुहुन्छ रिमोट र नियन्त्रित तरिकामा सबै मुद्रण प्रबन्ध गर्नुहोस्उपस्थित हुनु आवश्यक बिना। थप रूपमा, यो सहज र सरल छ, वेब इन्टरफेसको साथ जसको लागि तपाईले यन्त्रलाई स्थानीय नेटवर्कमा नियन्त्रण गर्न चाहेको ठाउँबाट जडान गर्न आवश्यक छ।
र यदि तपाइँसँग छ भने, तपाइँ एकल 3D प्रिन्टरमा नियन्त्रणहरू पठाउन सक्नुहुन्न नेट मा धेरै तपाईं ती सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, केन्द्रीय रूपमा धेरै Gcode फाइलहरू पठाउँदै। र सकारात्मक कुरा यो हो कि यो कम-स्रोत मेसिनमा स्थापना गर्न सकिन्छ, रास्पबेरी Pi SBC मा पनि। त्यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको मनपर्ने विकल्प हो। तपाईंले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ OctoPi प्याकेज उपलब्ध छ.
यदि यो तपाईंको लागि पर्याप्त छैन भने, OctoPrint ले थप सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्छ, जस्तै क्यामेरा प्रयोग गरेर प्रिन्टरको काम निगरानी गर्नुहोस् वास्तविक समयमा प्रिन्ट कसरी भइरहेको छ भनेर जान्न र टाढाबाट प्रमाणित गर्नुहोस् कि सबै कुरा ठीकसँग काम गरिरहेको छ।
अक्टोप्रिन्टबाट थप जानकारी र डाउनलोडहरू - आधिकारिक परियोजना पृष्ठ
यस सफ्टवेयर को विशेषताहरु
अब तपाईलाई अक्टोप्रिन्टको बारेमा थाहा छ, तपाईले थाहा पाउनु पर्छ यो के हो मुख्य सुविधाहरू र फाइदाहरू जसको लागि तपाईंले आफ्नो 3D प्रिन्टरहरू नियन्त्रण गर्न यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ:
टाढाबाट 3D प्रिन्टरको पूर्ण नियन्त्रण।
काम र निगरानी ट्र्याक गर्न क्षमता।
यसले तापक्रम सेन्सरबाट डाटा उपलब्ध गराउन सक्छ।
यदि तपाइँ आवश्यक देख्नुहुन्छ भने तपाइँ प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
WiFi मार्फत प्रिन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस्, साथै असामान्यताहरूको अवस्थामा पज वा रोक्नुहोस्।
Cura इन्जिन (CuraEngine) प्रयोग गरेर सफ्टवेयर प्रकार्यहरू काट्दै।
लेमिनेटर जसले तपाईंलाई 3D मोडेललाई तहहरूमा सही रूपमा काट्न अनुमति दिन्छ।
आफ्नो स्लाइसर अनुकूलित गर्नुहोस् र आफ्नो इच्छा अनुसार कन्फिगर गर्नुहोस्।
धेरै FDM प्रकार एक्सट्रुजन 3D प्रिन्टरहरूसँग अनुकूलता। विशेष गरी FlashForge संग।
क्रस-प्लेटफर्म (Linux, Windows, macOS, र Raspberry Pi)।
यसलाई सुधार गर्न ठूलो विकास समुदाय र आवश्यक परे सहयोग लिनुहोस्।
मोड्युलर, प्लगइनहरूको लागि कार्यक्षमताहरू थप्न सक्ने क्षमताको साथ।
अक्टोप्रिन्टका लागि प्लगइनहरू
मैले उल्लेख गरे अनुसार, अक्टोप्रिन्ट एक मोड्युलर सफ्टवेयर हो जसले यस सफ्टवेयरको आधारभूत कार्यहरू विस्तार गर्न प्लगइनहरूलाई समर्थन गर्दछ। द सबैभन्दा रोचक प्लगइनहरू तपाइँ तपाइँको निपटान मा छ:
अक्टोलाप्स: अक्टोप्रिन्टको लागि एउटा प्लगइन हो जसले तपाईंलाई टुक्राहरूको मुद्रण प्रक्रियाको क्रममा छविहरू खिच्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई भिडियोहरू, ट्यूटोरियलहरू, तपाईंले कसरी गर्नुभयो, आदि रेकर्ड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, कुनै पनि समयमा प्रिन्ट हेड देखिने छैन, केवल भाग, साँच्चै प्रभावशाली परिणामहरूको साथ।
फर्मवेयर अपडेटर: यो अन्य प्लगइन, जसको नामले सुझाव दिन्छ, तपाइँलाई 3D प्रिन्टरको फर्मवेयर सजिलै अद्यावधिक गर्न अनुमति दिन्छ। यसको लागि, फर्मवेयर पूर्व-कम्पाइल गरिएको हुनुपर्छ, र यसमा Atmega1280, Atmega 1284p, Atmega2560 र Arduino DUE प्रोसेसरहरूको लागि समर्थन छ।
फुलस्क्रिन वेबक्याम: OctoPrint को लागि यो अन्य प्लगइन पूर्ण स्क्रीनमा वास्तविक समयमा मुद्रण भिडियो हेर्न सक्षम हुन प्रयोग गरिन्छ। आधार सफ्टवेयरले गर्न नसक्ने कुरा। यसले स्क्रिनमा ओभरले जानकारी पनि प्रदर्शन गर्न सक्छ, जस्तै मुद्रण समय, तापमान, आदि।
वेबक्याम स्ट्रिमर: यो अन्य प्लगइनले तपाईंलाई स्ट्रिमिङ मार्फत थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रक्रिया देखाउन अनुमति दिन्छ। Twitch वा YouTube लाइभ जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रत्यक्ष प्रसारणहरूको लागि धेरै उपयोगी।
अक्टोप्रिन्ट कहीं पनि: यो अन्यले तपाईंलाई थ्रीडी प्रिन्टरको स्थिति हेर्न सक्षम हुन कुनै पनि मोबाइल उपकरणबाट टाढाबाट सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले आफ्नो मोबाइलमा वेबक्याम, तापक्रम, वास्तविक समय स्थिति, पज वा रद्द बटनहरू, स्क्रिनसटहरू, आदि हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
वस्तु रद्द गर्नुहोस्: कहिलेकाहीँ तपाईंले प्रिन्ट लाइनमा धेरै टुक्राहरू छोड्नुभएको हुन सक्छ, र हुनसक्छ ती मध्ये एउटा बाहिर आएर बाँकीलाई बिगारेको छ। ठिक छ, यो अक्टोप्रिन्ट प्लगइनको साथ तपाईले यस अवस्थालाई सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले बाँकीको विकासलाई असर नगरी समस्याग्रस्त टुक्रा मात्र हटाउनुहुनेछ। अर्को शब्दमा, यसले तपाईंलाई समय र पैसा बचत गर्नेछ।
Discord रिमोट: तपाइँलाई हाम्रो सर्भरलाई Discord वेब एपमा जडान गर्न, तपाइँको 3D प्रिन्टरलाई बोट मार्फत आदेशहरू पठाउन र यसरी टाढाबाट व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। यसरी, बोटले आदेशहरू सुन्नेछ र संकेत गरिएका कार्यहरू प्रदर्शन गर्नेछ (प्रिन्टिङ सुरु गर्नुहोस्, प्रिन्टिङ रद्द गर्नुहोस्, STL फाइलहरू सूची गर्नुहोस्, क्यामेराको छवि खिच्नुहोस्, प्रिन्टर जडान गर्नुहोस् र विच्छेद गर्नुहोस्, आदि)।
Themeify: तपाईंलाई अक्टोप्रिन्ट सर्भर दृश्यात्मक रूपमा परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ, यदि तपाईंलाई उपस्थिति मनपर्दैन र यसलाई आफ्नो मनपर्ने अनुकूलन गर्न चाहनुहुन्छ भने। र तपाईंलाई CSS को ज्ञान आवश्यक पर्दैन।
प्रिन्ट टाइम्स जीनियस: यसले हामीलाई भागहरूको मुद्रण समय सही रूपमा हेर्न अनुमति दिन्छ, किनकि अक्टोप्रिन्टका ती अलि बढी गलत छन्। यो गर्नको लागि, यसले वास्तविक-समय प्रिन्ट समय प्रदान गर्न उन्नत गणना एल्गोरिथ्म साथै प्रिन्ट इतिहास Gcodes प्रयोग गर्दछ।
बेड स्तर भिजुअलाइजर: अन्तमा, यो अन्य अक्टोप्रिन्ट प्लगइनले तपाईलाई समन्वयबाट, लेभलिङको लागि बेडको 3D जाल उत्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँसँग 3D प्रिन्टरमा निर्मित लेभलिङ सेन्सर छ भने धेरै उपयोगी छ, जस्तै BLTouch।
प्लगइन कसरी स्थापना गर्ने
यदि तपाइँ अक्टोप्रिन्टमा ती प्लगइनहरू कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई स्थापना गर्न, एक पटक डाउनलोड गरिसकेपछि, एकदम सजिलो छ। तिमीले मात्र गर्नुपर्छ अर्को चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् यसलाई सर्भरमा स्थापना गर्न:
OctoPrint वेब सर्भर पहुँच गर्नुहोस्।
माथिल्लो दायाँ क्षेत्रमा रहेको अक्टोप्रिन्ट सेटिङ खण्डमा जानुहोस् (रेन्च आइकन)।
अब प्लगइन प्रबन्धक खण्ड खोज्नुहोस्।
थप प्राप्त गर्नुहोस् बटन थिच्नुहोस्।
अक्टोप्रिन्टले अब तपाईंलाई प्लगइन थप्न ३ फरक तरिकाहरू प्रदान गर्दछ:
आधिकारिक प्लगइन भण्डारबाट स्थापना गर्नुहोस्
URL बाट स्थापना गर्नुहोस्
अपलोड गरिएको फाइलबाट स्थापना गर्नुहोस्
उत्तम विकल्प भनेको आधिकारिक रिपो प्रयोग गर्नु हो, किनकि यो सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हो र जसले तपाईंलाई प्लगइनको सबैभन्दा हालको संस्करण दिन्छ।
एकचोटि तपाईंले तपाईंलाई चाहिने एक चयन गर्नुभयो, यो स्थापना हुनेछ र तपाईंसँग यो तयार हुनेछ प्रयोग गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » अक्टोप्रिन्ट: तपाईंको थ्रीडी प्रिन्टर टाढाबाट व्यवस्थापन गर्नुहोस्
Odroid Go: तपाईंको आफ्नै पोर्टेबल खेल कन्सोल निर्माण गर्न किट